Izisetshenziswa ezihamba phambili ze-Logo ku-Intanethi
NgoLwesithathu, Novemba 4, 2020 NgoLwesine, ngoMashi 11, 2021 Douglas Karr
Yini inani le-logo? Buza inkampani efana neNike futhi ungasho izigidi zamadola - kepha iqiniso ukuthi, ngo-1971, UNike wakhokha u- $ 35 yelogo yabo. Kulezi zinsuku, izinga lokuhamba lomklamo we-logo lobuchwepheshe lingaba phakathi kuka- $ 150 no- $ 50,000. Sisanda kusebenza nekhasimende elisebenzise u- $ 16,000 kudizayini ye-logo ukuyithola kuphela lapho benza i-Google Image Search ngomkhakha wabo… baqeda inkampani futhi benza umncintiswano wokuklama ku-inthanethi esikhundleni se- $ 250 bathola eyangempela, ehlukile, kanye nelogo eyenziwe kahle elingana nomkhiqizo wabo jikelele.
Silibona ngokuphelele inani kulo lonke uphawu lomkhiqizo, umhlahlandlela wokwenza uphawu, nelogo ehambisanayo. Lokho kungaba utshalomali olubalulekile, kepha izinkampani ezenze utshalomali ziyibonile imiphumela. Kwesinye isikhathi awukwazi ukukukhokhela lokho, futhi, futhi siyaqonda! Uma nje udinga i-logo, kukho konke ukuthembeka kunezinsizakusebenza ezimangalisayo laphaya.
Nazi izinsiza zokuklama zelogo ezingaphezu kwama-50 engizitholile ku-inthanethi, kusuka ekukhuthazelweni kuya emiklomelweni, emincintiswaneni nasekuhlanganiseni abantu abaningi, kumabhulogi nakumasayithi womlando. Jabulela!
Thanda le vidiyo yomklami empeleni enze ilogo ku-Adobe Illustrator.
Ungayakha Kanjani i-Logo Ephelele
Thola ukuthi yini edingekayo ukwakha ilogo ephelele ngalezi zeluleko eziyi-10 ezibalulekile zokwakha ilogo kusuka I-Creative kuphela, kanye ne-logo design infographic! Jabulela.
Ilogo kufanele ibe elula.
Ilogo kufanele ibe engaphelelwa yisikhathi.
Ilogo kufanele ibe okudala.
Ilogo kufanele ibe iyafundeka.
Ilogo kufanele ibe ukuguquguquka.
Ilogo kufanele ibe isabele.
Ilogo kufanele ibe esiyingqayizivele.
Ilogo kufanele ibe efanele.
Ilogo kufanele ibe ohlakaniphileyo.
Ilogo kufanele ibe professional.
Kwesinye isikhathi uyazi ukuthi ufunani, kepha umane awunalo ithalenta lokuthatha umdwebo wakho we-napkin uye kuwuphawu lobuchwepheshe.
Ama-logotypers - Layisha umdwebo (isithombe nefoni yakho, ifayili le-PowerPoint, noma umdwebo ku-Paint) futhi sizoyiguqula ibe ilogo enhle kungakapheli amahora.
DesignEvo ngumenzi we-logo eku-inthanethi okusiza ukuthi udale ama-logo ahlukile futhi asebenza mahhala. Banikela ngezithonjana ezingaphezu kwesigidi ezitholakalayo ukusesha kuzo, amakhulu amafonti ombhalo nomumo ongakhetha kuwo nethuluzi lokuhlela elinamandla lokwenza ngokwezifiso i-logo yakho.
Qala Ukwakha Ilogo Yakho
Izinsiza ze-Crowdsourced Logo Design:
Amasayithi we-Crowdsourced anezinethiwekhi zokusabalalisa zabadwebi bezithombe abangathumela ama-logo. Owinile unikezwa imali. (Kuhle kuwe… ayihlali njalo ibahle kubaklami!)
Isixuku - ukukhishwa kwabantu abaningi kusuka ku- $ 200.
DesignContest - qalisa umncintiswano wakho kusuka ku- $ 100.
I-DesignCrowd - Udinga i-Logo Design? Crowdsource Imiklamo Yakho eku-inthanethi Manje!
I-Digital Point - thumela inani lakho nezidingo zakho kulezi zinkundla.
eYeka - imincintiswano yabantu abaningi lapho usho khona intengo yakho (amanani entengo nemiklomelo ye-upscale).
48hours Ilogo - ukwakhiwa kwabantu abaningi kusuka ku- $ 89
Imincintiswano Yezithombe - ukuncintisana kusuka ku- $ 1,000
I-GraphicRiver - logo design and templates
Ngokweqhwa - imincintiswano evela ku- $ 100
I-LogoMyWay - imincintiswano evela ku- $ 200.
IlogoImidlalo - Thola i-logo oyifunayo ngokukhetha kusuka kumiklamo yangokwezifiso engu-50-200 + kusuka ku- $ 275.
Ama-99designs - imiklamo yabantu abaningi kusuka ku- $ 211
MyCroBurst - ukukhishwa kwabantu abaningi kusuka ku- $ 149
khetha.DESIGNS - Bamba umncintiswano wakho wokuklama
IZenLayout - imincintiswano eqala ku- $ 250
Izinkampani Zobungcweti Zobuchwepheshe:
Ama-ejensi ahlinzeka ngezinsizakalo zelogo ngokuvamile aqinisekisa ukuthi umsebenzi wawo uhlukile futhi usebenza ukufanisa ilogo yakho nomkhiqizo wakho wonke.
I-Logo Design engabizi - amaphakheji avela ku- $ 45.
IBusinessLogo.net - amaphakheji avela ku- $ 99.
I-BXC - inkampani yokubeka uphawu, cela isilinganiso.
Amafolda weNkampani - Ukubonisana kwamahhala, insizakalo yokuklama eqala ku- $ 75 ngehora
I-Infinity Logo Design - imiklamo kusuka ku- $ 89
Inkd - amaphakheji wokuklama ochwepheshe asuka ku- $ 99
IlogoBee - imiklamo kusuka ku- $ 199
I-Logo Factory - logo design from $ 395
Ilogo Design Team - amaphakheji asuka ku- $ 149
Ilogo Okutholakalayo Asikho isilinganiso Kushicilelwe ngu International International Agency - oxhumana naye ukuthola izingcaphuno
I-Logo Loft - amaphakheji avela ku- $ 99.
IlogoMagic.com - amaphakheji aqala kusuka ku- $ 269.
IlogoNerds.com - amaphakheji aqala ku- $ 27.
Ukungena - amaphakheji aqala ku- $ 250.
Ama-logoworks - kusuka ku-HP, imiklamo evela ku- $ 299.
AbakwaNetMen - Idizayini eqala kusuka ku- $ 149.
I-Vistaprint - amalogo enziwe ngaphambilini futhi azenzakalelayo aqala mahhala esebenzisa amasevisi abo.
Amasayithi Wokuphefumulelwa Nge-logo:
Mhlawumbe ungathanda ukuzama ukwenza i-logo yakho noma uthole ezimbalwa ezikhuthazayo ongabheka kuzo! Nawa amanye amasayithi wezinsizakusebenza ezinhle zama-logo.
Ama-blog-omotives - kusuka kumxhumanisi wokwazisa ngomkhiqizo uJeff Fisher
I-Creattica - isiza esivela ku-Envato
Izimpawu Ezidumile - iwebhusayithi ezinikele ekuletheleni ezinye zezindaba ezinhle kakhulu, izibuyekezo, nolwazi oluhlobene nomkhakha we-logo design.
I-Logobird - ILogobird iyibhulogi nesitudiyo esizinze eLondon.
Inkampani yeLogo - Custom Designs Designs ... ukuthatha imiklamo ezindaweni eziphakeme ezintsha.
Ilogo Bliss - logo design ugqozi kanye gallery indawo.
IlogoPond - ILogopond ikhombisa okungcono kakhulu emsebenzini wobunikazi kusuka kuwebhu yonkana. Umdwebi we-logo kusuka kuzo zonke izigaba zokuthuthuka nezindawo zomhlaba kaningi kule sayithi.
Ilogo Blog - I-Blog Blog inikezelwe ekubeni ngumthombo omkhulu we-web design ye-logo.
Ilogo Design Blog - I-Logo Designer Blog iyi-blog egxile kuphela ekuzileni uphawu, ku-logo nakuyilo lobunikazi.
Ilogo From Dreams Awards - ibhulogi enezethulo zanyanga zonke kanye nomnqobi wanyanga zonke.
I-Logolog - I-Logolog ibhulogi mayelana nokuklanywa kwelogo.
I-Logolounge - Izindaba kanye izitayela on logo.
Abezindaba Bistro - isiza semiklomelo se-logo sonyaka.
Ilogo yami ye Highbridge
Eminyakeni edlule, umklami wami wabona uphawu lwami futhi waqhubeka wangibuza ukuthi ngingathanda yini ukuthi ibuyekezwe. Bengilokhu ngithi cha wabe esenginikeza inguqulo yakhe…
Kuyisibonelo esihle sento ehlukile futhi engalibaleki (ngombono wami). Umculi wenze izinto eziningana:
Ufake kokubili u-d no-k (uhlobo)
Usebenzise umcibisholo ophezulu ukumela ikhono lami lokusiza amaklayenti akhule.
Usebenzise ama-engeli angajwayelekile ohlangothini ngalunye lwelogo ukumela ukuthi angizenzi izinto ngokwejwayelekile.
Ngenkathi ngingakaze ngimbuze ngokwakhiwa kabusha, ngavele ngathandana nokuthi lumelela kanjani umkhiqizo wami. Bengakha amakhadi kabusha, izimpawu zami, newebhusayithi yami ngosuku olulandelayo!
Thenga amafayili e-Vector Logo ukuze uzenzele okwakho
Siyabathanda abaxhasi bethu ku Depositphotos futhi banethoni lamalogo ongawathenga amafayili e-vector. Bona okuthile okuseduze nalokho okudingayo? Yithenge, uyilande futhi uyenze ngendlela oyifisayo ukuze ibe ngeyakho!
Thenga ama-Vectors Manje!
Ukudalula: Sisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kukho konke lokhu okuthunyelwe.
Imibhalo eyengeziwe kanye ne-Infographics
Ungayakha kanjani ilogo eyingqayizivele nengalibaleki
Tags: imiklamo ye-logo enhleinkampani enhle kakhulu yokuklama logodesign enhle kakhulu ye-inthanethiinsiza enhle kakhulu yokuklama i-inthanethithenga uphawuthenga ilogologo eshibhile online designamalogo ashibhile onlineumklamo we-logo yomthombo wesixukuisixukuidizayini yelogo yezinsizakusebenzalogo yabantu abaningiidizayini yelogo yabantu abaningiidizayini yelogo yokuklamaamalogo wokuthwebulaamadingadizayina ilogoilogo yokuklamadesigncontestyakhelweukwakheka kwelogo ye-inthanethiukudala njeuhlu lwamasayithi we-logologoinjabulo ye-logologo ibhulogilogo design inkampani ukubuyekezalogo imincintiswano designuphawu lwe-infographiclogo ugqoziamasayithi we-logoucwaningo lwelogoama-logo vectorsuloloungephumaama-logosimibono yelogo yokumakethai-media bistrolapho ukuthenga logo
Phendula: Shintsha Ukuzibandakanya Kwakho Kokuthengisa Nge-LinkedIn Email Search kanye ne-Outreach
Jun 6, 2010 ku-10: 40 PM
UDouglas - Siyabonga ngokusifaka ohlwini lwakho.
I-FYI sisanda kwethula uhlobo olusha, olungenzeleli 'lwe-hybrid crowdourcing' lapho amakhasimende angamema futhi akhokhele abaklami abathile ukuthi bahambise imincintiswano yokwakha - bona ukukhishwa kwethu kwabezindaba kusukela namuhla: http://prwire.com.au/permalink/18300/design-contest-website-launches-hybrid-crowdsourcing-model-with-15-000-designers-2
Iphuzu eliyinhloko lokhu kusho ukuthi abaklami bathola inkokhelo eqinisekisiwe kungakhathalekile ukuthi umklamo wabo uyakhethwa yini. Ukwenza i-Crowdsourcing akudingeki ukuthi kube onqobayo kuthatha konke noma, njengoba ubeka, “akukuhle kubaklami”! Uma unentshisekelo yokwenza inhlolokhono yami noma ukwenza iphrojekthi yokufunda ngamacala nge-DesignCrowd sicela uxhumane nge- http://twitter.com/designcrowd (I.
Futhi, nazi izinsiza kusebenza ezimbalwa zokwakhiwa kwelogo kuwebhusayithi yethu.
UJun 7, 2010 ngo-9: 28 AM
Ngenkathi ngincoma ikhono lakho ku-"logo design" yakwa-Google, ngithola konke ukwanda nokugujwa komklamo we-logo oshibhile kungathandeki. Amasayithi owanikezile avele anikeze izithonjana ezibukeka kahle (ngokufana negama lakho lapha), ngaphandle kokucabanga ngamasu.
Ukuphusha amasayithi e-logo okucindezela abantu abaningi - ngenkathi uthumela amathiphu wokuqinisekisa ukuthi uthola ilogo “yoqobo” - kuyahlekisa uma kungenjalo kube budedengu.
Uqinisile ephuzwini elilodwa: uyakuthola okukhokhelayo. Kodwa-ke, ithemba lami ngabafundi bakho ukuthi bazokwenza okuthe xaxa ngaphambi kokunikeza i-logo yabo njengengxenye yomncintiswano wokuklama.
Uthishanhloko, umqondisi wokudala
UJun 7, 2010 ngo-11: 07 AM
Yazisa impendulo (yenza njalo) futhi ngiyaqonda ukuthi ama-ejensi wokubeka uphawu engcupheni angaphansi ukufakazela ukubaluleka kwawo. Anginakungabaza ngokubaluleka kwakho - ngibonile amafemu afana noKristian Andersen ethatha izinkampani kusuka kulutho ziye emakhulwini ezigidi zamaRandi - ezinye zazo zikweletwa ukuqashelwa komkhiqizo wazo.
Umklamo we-logo uyahlaselwa - akufani nanoma iyiphi enye inkampani esuselwa kuwebhu okwamanje. Sinabantu abafana noChris Anderson bememeza "Khulula!". Amasayithi wokubamba amavidiyo awakwazi ukuncintisana ne-YouTube, izinkampani ze-Analytics ziye zalwa ne-Google, nezinhlelo ze-CMS ezifana ne-Squarespace encintisana ne-WordPress.
Ngingasukuma ngiphikisane nokuthi “Akukho Okucacisiwe”, kodwa ngisebenzise uqobo lwazo lezi zinsizakalo ngathola imiphumela emihle ngokwedlulele ngazo. Akunakulifihla iqiniso lokuthi njengoba ungabathandi, bakhula ekuthandeni. Futhi ngenkampani enezimali futhi engakwazi ukukhokhela uphawu lochwepheshe, kungani ungahambisi ilogo eshibhile, ebushelelezi? Babezokwenza ngaphandle kokunye okunye.
Ngingathanda ukukwenza ubhale ukuthi kungani ungagwema ezinye / eziningi zalezi zinsizakalo!
Jun 9, 2010 ku-1: 38 PM
IGeniusRocket (www.geniusrocket.com), eholwa ngowayengu-AOL exec Mark Walsh futhi ephethwe nguPeter LaMotte, inamakhono amaningi okuthola ama-logo nezinye izidingo zokudala.
Nov 2, 2010 ngo-4: 25 AM
Siyabonga ngokwabelana ngohlu!
Sisanda kwethula isiza esisha somncintiswano we-logo design design: http://www.logoarena.com
Okthoba 10, 2011 ngo-6: 10 AM
Uyacelwa ukuthi ususe isimangaliso sokungena ohlwini lwakho ngoba yi-FRAUD. Bona http://pondpad.com/forum/viewtopic.php?id=3856 andhttp: //www.wordpressblue.com/2009/08/marvel-logo-designs/
Okthoba 10, 2011 ngo-8: 16 AM
Ngiyabonga, Michaël! Ngibasusile ohlwini futhi ngangeza i-Creattica.
Nov 30, 2011 ngo-3: 43 PM
Qaphela iMarvel Design Logo Designs. Hlala kude baneminyaka yobudala yokuphendula. Okungenzi kahle kakhulu.
Jul 3, 2012 ku-11: 54 AM
Ngo-Apr 16, i-2013 ku-7: i-46 PM
Ngisanda kwenza i-logo nge http://www.logotypers.com Bathathe umdwebo wami bawuguqula waba ilogo yobuchwepheshe nge $ 10 kuphela (kepha kufanele ulayishe umdwebo, noma i-ppt noma okuthile okuzobakhombisa)
Ngo-Apr 16, i-2013 ku-8: i-19 PM
Yeka umqondo omuhle! Ngingeze ama-Logotypers esigabeni sayo. Ngiyabonga!
May 21, 2013 ku-6: 04 AM
Yonke imithombo yokwabelana nge-logo iyasiza, idizayini emangalisa enesethulo sokudala. Izinto ezinhle ezabiwe ngezakho. Kwaziswa kakhulu futhi uzizwe ubonga ngokwabelana okuthandekayo.
May 13, 2015 ku-3: 26 PM
Ngiyaluthanda lolu hlu. Iqiniso onikeza ngalo izinketho ezahlukahlukene zabantu kanye nezixhumanisi, kwenziwe kahle… lokhu kungunozinti!
May 13, 2015 ku-8: 21 PM
Ngiyabonga kakhulu uGabriella!
Okthoba 17, 2015 ngo-1: 34 AM
Ngo-Apr 21, i-2016 ku-8: i-02 PM
May 30, 2016 ku-3: 12 AM
ama-omg, lawo ma-greats
May 30, 2016 ku-3: 14 AM
izixhumanisi ezinkulu, tnx
UJun 28, 2016 ngo-9: 25 AM
I-logo isithombe sesibuko somkhiqizo wakho. Iresiphi yakho yokwakha ilogo iyaheha impela.
Yebo, ilogo yeNike yabiza u- $ 35 ekuqaleni kepha manje ibiza ngaphezu kwama- $ 600,000. Ukuklama ilogo enhle kuphela okungasoze kukusize ekuthuthukiseni ibhizinisi lakho. Izinsizakalo nemikhiqizo yakho kufanele futhi iveze amandla e-logo yakho.
Okthoba 4, 2017 ngo-6: 02 AM
Bengifuna imiqondo ye-Logo Design yokwenza i-logo eyingqayizivele futhi ngathola okuthunyelwe kwakho. Siyabonga ngalokhu okuthunyelwe. Inemibono emihle ongayisebenzisa kuphrojekthi yami entsha.
Aug 29, 2018 ku-1: 30 AM
Siyabonga ngamathiphu akho abalulekile
Dec 20, 2019 ku-9: 16 AM
Okuthunyelwe okuhle mayelana nokuklanywa kwelogo. Impela ngithole ugqozi olukhulu ngokuthunyelwe okusha. Ngiyabonga ngetoni ngalokhu Doug, merry xmas!
Jan 7, 2020 ngo-4: 08 PM
Ngiyabonga kakhulu ngamazwana amnandi uSally! Ngiyethemba ube neholide elimangalisayo.
May 16, 2021 ku-12: 19 PM
UJun 29, 2021 ngo-9: 49 AM
Ezinye Izisetshenziswa Zokwakhiwa Kwezimpawu Eziqinisekisiwe Zokukhuthaza